Bit By Bit - dhaqanka loo kuurgalo - 2.3.2.6 Dirty
Qaar ka mid ah cilmi-waxay aaminsan yihiin in ilaha xogta weyn, gaar ahaan kuwa ka soo ilo online, waa sanayd ee maxaa yeelay, waxay si toos ah ururiyay. Dhab ahaantii, dadka soo shaqeeyay ilaha xogta weyn ogahay in ay si joogto ah wasakh yihiin. Taasi waa, waxay inta badan waxaa ka mid ah macluumaadka aan ka tarjumayaan falalka dhab ah oo xiiso in cilmi. saynisyahano bulshada badan oo hore u dhuun daloola geedi socodka ah ee nadiifinta xogta sahanka bulshada oo baaxad weyn, laakiin nadiifiyo ilaha xogta weyn waa ka sii adag, waayo, laba sababood awgood: 1) Waxayna ahaayeen kuwa aan abuuray by cilmi cilmibaadhayaal iyo 2) cilmi guud ahaan waxay leeyihiin waxgarasho yar ee sida iyana way abuurmeen.
The khatarta xogta raad digital wasakh waxaa lagu muujiyey by Back iyo shaqaalaheeda " (2010) daraasad jawaabta dareen in weeraradii of September 11, 2001. Cilmi caadi ahaan baran jawaabta dhacdooyinka naxdinta isticmaalaya xogta yallow ururiyay in ka badan bilood ama xataa sanado. Laakiin, Back iyo asxaabtii helay fariimo ah had iyo jeer-on il of digital raad-ka timestamped, si toos ah duubay ka 85,000 American pagers-iyo this awood cilmi inaad wax ka barato jawaab dareenka on waqti badan kaga dhigto. Back iyo asxaabtii abuuray waqtiga daqiiqadii-by-daqiiqo dareenka of 11 September by sireed content dareenka farriimaha pager ah by boqolleyda erayo la xiriira (1) murugo (tusaale, iyagoo qaylinaya, walbahaar dartiis), (2) walaac (tusaale ahaan, walwalsan tahay, cabsi), iyo (3) cadho (tusaale ahaan, nacaybka, muhiim). Oo waxay arkeen in murugo iyo walwal fadhin maalintii oo dhan oo aan qaab xoog leh, laakiin waxaa jiray koror duwanyihiin cadho maalintii oo dhan. cilmi Tani waxay u muuqataa in ay noqon sawir cajiib ah oo xoogga had-on ilaha xogta: isticmaalaya hababka caadiga ah waxa uu noqon lahaa wax aan macquul aheyn in ay sida waqtiga-xalinta sare jawaabta degdeg ah dhacdo aan la filayn a.
Just hal sano ka dib, si kastaba ha ahaatee, Cynthia Pury (2011) oo dheeraad ah si taxadar leh eegay xogta. Waxay ogaadeen in tiro badan oo ka mid ah fariimaha la filayo xanaaqay ee ay hal pager ah oo waxay wada ahaayeen isku mid. Halkan waxa ah kuwa fariimaha la filayo cadhooday ayaa yiri:
farriimo Kuwan waxaa ku tilmaamay cadhooday, maxaa yeelay, waxay ka mid erayga "DARAN", kaas oo laga yaabaa in guud ahaan tilmaamaya cadho laakiin ma kiiskan. Soo saarida fariimaha ee ay this pager hal iswada si buuxda tiraa korodhka muuqata cadho ka badan koorsada ah maalintii (Jaantuska 2.2). In si kale loo dhigo, sabab weyn ee Back, Küfner, and Egloff (2010) wuxuu ahaa artifact ah mid pager. Tusaale ahaan this muujinayaa, falanqaynta fudud xogta yara adag oo murugsan oo awood u si ay u tagaan si dhab ah qaldan.
Jaantuska 2.2: Qiyaasta isbedelka cadho badan koorsada of September 11, 2001 ku salaysan 85,000 pagers American (Back, Küfner, and Egloff 2010; Pury 2011; Back, Küfner, and Egloff 2011) . Asal ahaan, Back, Küfner, and Egloff (2010) sheegay qaab cadhada kordhaya maalintii oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, inta badan oo ka mid ah fariimaha muuqata xanaaqay ee ay pager hal in si joogta ah soo diray fariin soo socda: "reboot NT mashiinka [name] ee golaha wasiirada [name] at [meesha]: DARAN: [taariikhda iyo waqtiga]". Iyada oo fariin this saaro, kororka muuqata cadho baaba'aa (Pury 2011; Back, Küfner, and Egloff 2011) . Tiradaas waa dhalmo ah oo berdihii 1B in Pury (2011) .
Inkasta oo xogta wasakh oo la abuuray isagoo aan u kasayn-sida mid ka mid buuq pager-kartaa in la ogaado by cilmibaadhe macquul taxadir, waxaa kale oo jira qaar ka mid ah nidaamyada online in jiidan emaillada ula kac ah. emaillada Kuwani firfircoon dhalin xog been abuur ah, iyo inta badan gasha faa'iido-shaqo aad u adag tahay in la sii ogola qashin qarinaayay. Tusaale ahaan, hawlaha siyaasadeed on Twitter muuqataa in ay ugu yaraan ku jiraan qaar ka mid ah spam macquul casri ah, ku dheehan yahay qaar ka mid ah sababaha siyaasadeed waxaa si ula kac ah ka dhigay in la eego caan ka badan ay dhabta ah waa (Ratkiewicz et al. 2011) . Cilmi la xogta ka shaqeeya ay ku jiraan laga yaabaa in spam ula kac waajahaan caqabad ah qanci ay dhagaystayaasha in ay ogaan iyo saaro spam la xiriira.
Ugu dambeyntii, waxa loo arkaa xogta wasakh ku xirnaan karaa siyaabo khiyaano on su'aalo cilmi aad. Tusaale ahaan, itusi badan oo Wikipedia waxaa abuuray by Bots iswada (Geiger 2014) . Haddii aad xiisaynayso in ecology ee Wikipedia, markaas Bots kuwanu waa muhiim. Laakiin, haddii aad xiisaynayso sida aadanuhu ay gacan Wikipedia, itusi kuwan by Bots sameeyey waa in laga joojiyaa.
Habka ugu fiican ee si looga fogaado in lagu siri by xogta wasakh yihiin in la fahmo sida xogta aad la abuuray si ay u qabtaan falanqaynta shidaal fudud, sida samaynta sawirrada firidhsan fudud.